Isiphazamiso osishiya nguCarlos Montero, inoveli yolwaphulo-mthetho eya kuthi ikuthimbe | Uncwadi lwangoku
Ubumdaka obushiya nguCarlos Montero
UJuan Ortiz | | Ababhali, Iincwadi, Inoveli emnyama, Ezahlukeneyo
El ukungcola okushiya kwakho yinoveli yolwaphulo-mthetho eyenziwe ngumbhali waseSpain uCarlos Montero. Ipapashwe ngu-Edpasa Libros yoHlelo ngoMatshi 22, 2016, yinto evuselelayo yengqondo egcwele ukuthandabuza kunye namayelenqe ukusuka kwisivakalisi sokuqala ukuya esiphelweni esingalindelekanga. Kufunyenwe uhlolo olulungileyo kwizibuko ezibekelwe ukuphononongwa kweencwadi, nangona ezinye iingcali zoncwadi zibonisa ubukho bezikhewu kumgca wokubalisa.
Uninzi lwazo Abafundi bayamangaliswa kukuzibandakanya okukhoyo kule ncwadi ngokudibeneyo kunye nokufunda kwayo ngokukhawuleza nangokutyibilikayo Yenziwe ngamaphepha angama-408). Kwelinye icala, izimvo ezingalunganga zibonisa ukudana kwabo ngokuvalwa, kunye nokungabikho kwesizathu esifanelekileyo sokwakha abalinganiswa abathile. Nangona kunjalo, Isiphithiphithi osishiyayo inomgangatho ongenakuphikiswa: awushiyi mntu ngokungakhathali.
1 Umxholo kunye nengxoxo
2 Ukulungelelaniswa kweTV
3 Yindibaniselwano yesifo osishiyileyo
3.1 URaquel kunye nokufika kwakhe eNovariz
3.2 Izisongelo kunye neziphelo ezivulekileyo
4 Uhlalutyo loMyalezo oshiya kuwo
Umxholo we-neuralgic we Isiphithiphithi osishiyayo ukuxhaphaza ngeendlela ezahlukeneyo, kuquka oko kubizwa ngokuba yi-cyberbullying. Ewe, ukuhlukunyezwa "kuyinto eqhelekileyo" kwiinethiwekhi zentlalo namhlanje. Imvakalelo yobutshaba obungapheliyo eyakhelwe ngakuRaquel, ophambili, ekusebenzisaneni kwakhe nabalinganiswa abamnyama nabaneenjongo ezimbi, akukho namnye kubo onokuthenjwa, ngaphandle kwengqwalaselo.
Iziganeko ezichaziweyo zenzeka eNovariz, idolophu eyintsomi eGalicia. Nangona kunjalo, kubafundi abaninzi abaqhelene nalo mmandla okumantla eSpain, le khola ibonisa ezona mpawu, zitsalwe kubume bendawo, uyilo, i-anthropological kunye nenkcubeko kuyo nayiphi na indawo yaseGalician.
Ngaphandle kokuba yayiyimpapasho yokuqala eyaziwayo kaMontero, le ncwadi yanikwa iPrimavera de Novela Prize yonyaka ka-2016 (eyona noveli yamatyala). Ukongeza, Isiphithiphithi osishiyayo Iya kuziswa kumabonakude yiNetflix. Le mveliso ibonisa ukuthandwa komsebenzi nangona kungekho mvumelwano malunga nokwamkelwa kwayo kuluntu jikelele.
Incwadi iya kutshintshwa phantsi kwefomathi ye-serial, inezizahluko ezi-8, nganye kuzo inemizuzu engama-40. Imiboniso yangaphandle iya kurekhodwa eGalicia. Abalingisi benkqubo baquka amagcisa awaziwayo kunye nabasakhulayo, kubandakanya u-Inma Cuesta, Tamar Novás, Arón Piper, Bárbara Lennie no Roberto Enríquez.
Umbhali uCarlos Montero.
Yindibaniselwano yesifo osishiyileyo
URaquel kunye nokufika kwakhe eNovariz
UCarlos Montero ubhale imbali eqinisekileyo kakhulu URakeli, umlinganiswa ophambili. Nguye obalisa ngeziganeko zomntu wokuqala kwaye ubonakala ngathi uhlala esengozini yokufa. Kodwa, ekuqaleni kwencwadi imeko yomngcipheko ayibonakali. Endaweni yokuba umbhali akwazi ukuyiguqula ibe luhlobo lweemvakalelo zokufihla okanye isoyikiso esingaphantsi.
Ekuqaleni kwinoveli, uRaquel wafika eNovariz (Inguqulelo eqanjiweyo ka-Ourense), idolophu eqhelekileyo eGalicia apho kuhlala khona usapho lomyeni wakhe. Apho uqala ukusebenza njengotitshala obambeleyo kwiziko lasekuhlaleni. Iimeko ezinoburharha azithathi xesha lide ukuvela, kuba Kungekudala emva kokuba efumene ngokusweleka komanduleli wakhe, uElvira, ngokuzibulala.
Izisongelo kunye neziphelo ezivulekileyo
Kwiintsuku ezilandelayo imbonakalo iyaqhubeka nokuba mandundu, ngakumbi xa Umntu ushiya inqaku eliphazamisayo kwingxowa kaRaquel emva kokunika iklasiKwaye "Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuzibulala?" Ukongeza, akakholelwa kwiinguqulelo azivayo malunga nokufa, kwelinye icala, zidlulisa ukungathembani okuninzi.
Zininzi iziphelo ezikhululekileyo. Kwindawo yokuqala: ukuba uElvira ebecingelwa ukuba ungutitshala othandwa ngabafundi bakhe, ungene njani kuxinzelelo olukhulu kangangokuba angade athathe ubomi bakhe? Kwenzeke ntoni kanye kanye? Kodwa ayisiyiyo eyona nto ikhathazayo, kuba URaquel uhlala ezibuza ukuba ngaba ikhona ipateni ye-macabre ephindayo nayo.
Ke URaquel kufuneka enze isigqibo esinye sokucacisa yonke into: ukuphanda yedwa ngokufa kuka-Elvira. Isiphumo esikhawulezileyo kukukrokrelwa kwabemi baseNovariz, nokuba yinto edelekileyo. Ukwahlulahlula iinjongo kukuba yinto engenakuthambeka, eguqukayo.
Akukho mntu ubalekayo kurhano. URaquel akakwazi ukuthembela kuye nawuphi na ummi waloo dolophana incinci yaseGalician. Akakwazi nokuthemba umyeni wakhe ... ezinye izikhokelo zalatha kuye njengonobangela wokufa kuka-Elvira. Ukususela kuloo mzuzu ukuya phambili, inoveli ifumana isantya esikhulu ngakumbi ngenxa yeemfihlo ezilandelanayo ezityhiliweyo.
Inqanaba lokungaqiniseki lifikelela kumanqanaba aphezulu kakhulu, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba embindini wencwadi uninzi lwamathandabuzo luvela rhoqo malunga nengqondo yabo bonke ababandakanyekayo. Izinto ezingaziwayo eziye zaqokelelwa kwi-psyche kaRaquel ziguqulwa zayinto ekhathazayo, zeziphi iinjongo zokwenyani zabanye? Ungayifumana njani xa abantu bengakhuthazi ukuzithemba okuncinci?
Uhlalutyo loMyalezo oshiya kuwo
Nangona abanye abagxeki boncwadi bekhomba ekucacisweni kwabalinganiswa abachanekileyo, Kubalulekile ukuba uthathele ingqalelo umbandela ophantsi kwengxelo. Ngapha koko, amagama avela ngaphakathi kwengqondo yomntu ophambili. Ngesi sizathu, indlela ethile engacacanga kwindlela yokuziphatha kwabakwishumi elivisayo echazwe emsebenzini inokuba kufanelekile.
Iziphumo zomdlalo ziyamangalisa. Amagqabantshintshi abanye abafundi kwi-intanethi abonisa ukuphela kwe Isiphithiphithi osishiyayo njengempikiswano okanye "Uboya obuninzi". Ngokuchasene noko, uphononongo oluqinisekileyo luninzi oludumisa isitayile sokubhala samabali kunye nokulangazelela ukukhutshwa kwendlela elandelayo.
Caphula umbhali uCarlos Montero.
Ngakolunye uhlangothi, Ulwimi oluthethwayo olusetyenziswe nguMontero longeza ubungqina bokwenyani emsebenzini wakhe. Umbhali udlala kaninzi ngento eyoyikisayo yabalinganiswa abaphambili, enxenxa abafundi ukuba bacamngce ngezihloko ezinje ngeziyobisi, imfundo, isini kunye nolawulo lolwazi olujikeleza phakathi kwezixhobo eziphathwayo.
Ndiyathetha Isiphithiphithi osishiyayo uhlangabezana nazo zonke iimfuno eziyimfuneko kwisimangalo esihle sengqondo. Ngesi sizathu, sinokuqiniseka ukuba uCarlos Montero ulizuzile ibali apho asebenzise ngokugqwesileyo oovimba bezinto eziqhelekileyo zokurhanela okuqhelekileyo nokungahambelaniyo, ngokudibeneyo nemixholo eqhelekileyo kuluntu lwangoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ubumdaka obushiya nguCarlos Montero
UWilkie Collins. Isikhumbuzo sokuzalwa kwakhe. Iincwadi eziphambili